Baaritaan lagu sameynayo mid ka mid ah Kooxaha Premier League Ee Lacagaha Badan Suuqa Ku Bixiyay | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Baaritaan lagu sameynayo mid ka mid ah Kooxaha Premier League Ee Lacagaha Badan Suuqa Ku Bixiyay
Isniin,September, 4, 2017 (HNN) Maamulka horyaalka La Liga ayaa doonaya in xiriirka qaaradda yurub ee UEFA ay baaraan hanaanka suuqa kala iibsiga ay lacagaha ugu qarash gareysay kooxda Manchester City iyadoo la dhaqan galiyay rabitaankeedii ku aadanaa in la baaro dhaqaalaha Paris Saint Germain.
Madaxweynaha La Liga Javier Tebas ayaa bayaan u qoray Associated Press kaas oo ah qarash gareynta kooxaha ay sameynayaan iney dhibaato ku tahay tartamada yurub sidoo kalana ay si aan macquul aheyn u waxyeeleyneyso wax soo saarka kubadda cagta.
Javier Tebas wuxuu 22-kii August ka dalbaday UEFA in baaritaan lagu sameeyo dhaq-dhaqaaqa Man City iyo Paris Saint Germain ee xagaagan, labadaan kooxood ayaana ah kuwa ugu badan ee lacago ku bixiyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda xagaagan ee xirmay afar maalmood ka hor.
Jimcadii lasoo dhaafay ayey xiriirka qaaradda yurub ee UEFA xaqiijiyeen in la baari doono habka ay u qarash gareysay lacagaha Paris Saint Germain iyadoo Tebes uu doonayo in si gaar ah loo baaro PSg iyadoon la tix-raaceynin taariikhdii hore.
Paris Saint Germain waxey jabisay rikoorka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda markiii ay lasoo saxiixatay Neymar Junior oo ay 222 Malyan oo Euro ku keentay Parc des Princess sidoo kalana Kylian Mbappe ayey amaah kula soo wareegeen balse xagaaga soo aadan waxey bixin doonaan aduun ka badan 160 Malyan oo Euro.
Dhanka kale Manchester City iyana waxey suuqa ku bixisay lacag ka badan 200 Malyan Oo Euro oo ay kusoo xerogalisay Ederson, Danilo, Benjamin Mendy, Bernardo Silva iyo Kyle Walker.